Waxaan tacsi naxdin iyo tiiraanyo leh u direysaa dhammaan shacabka soomaaliyeed, Dhamaan Eheladii iyo Reerkii ay ka geeriyooday Xildhibaan Yuusuf Mire Seeraar iyo Xildhibaan C/wali Aw-Muxumed sheak Maxamad oo maanta gacan ka gardaran ay qarax argagixiso ah kula beegsatay magaalada duusamareeb.
Ugas ciise ugaas cabdulle,Ugaaska beesha sade ayaa saxaafada u sheegay in uu si wayn oga xunyahay qarax foosha xun ee argagixisadu Xagjirka ah kula beegsatay xildhibaano Aqoonyahno kasoo jeeda gobalka galgaduud .
Ugaas ciise ayaa si toos ahna u cambaareeyay qaraxaas foosha xun . kaas oo ay dhimisho iyo dhaawac ka soo gaareen masuuliyeen qaran , aqoonyahno, cuqaal iyo dad rayad ah . , waxaana EEBBE uga baryayaa inuu Janadii Fardowsa ka waraabiyo, dhammaan ummadda Soomaaliyeedna Samir iyo IIMAAN ka siiyo, inta dhaawaca ahna ha caafiyo,
Xildhibaan Yuusuf Mire Seeraar iyo Xildhibaan C/wali Aw-Muxumed ayaa dhinteen qaraxaasi islamarkaana uu ku dhaawacmay xildhiban xuseen warsame gafarsay. xiladhibaan general cabdiraxman isaaq biixi, Axmed C/salaam, Dad rayada aha iyo mas’uuliyiin kale.
Ugu danbeyntii, Ugas ciise ugaas cabdulle waxaan ka codsaneynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed inay u wada duceeyaan dhamaan dadka ku geeryooday qaraxa foosha xun ee ka dhacay caasumada gobalka galgaduud
Ugaas Ciise Ugaas Cabdulle Ugaska bari ee beesha Sade Daarood Gobolka Galgaduud iyo deegaanka puntland
703 401 8292
Posted by rahm Warsame at 6:41 PM